के फेसबुकको बलमा चुनाब जितेका थिए ट्रम्पले ? | Jukson
यस विषयमा धेरै सनसनीपूर्ण विषयहरु छन्, अनैतिक व्यवहारका आरोप प्रत्यारोप छन्, भावनाहरुका साथ खेलवाड छन् भने तथ्यांकहरुको दुरुपयोगका घटना पनि छन् ।
फेसबुक र तथ्यांकहरुको धन्दा गर्ने कम्पनी क्याम्ब्रिज एनालिटिका यो विषयवस्तुको केन्द्रमा छ ।
त्यसमाथि मानिसका निजी जानकारी तथा त्यससँग जोडिका डाटाको गलत प्रयोग गरेको आरोप छ ।
क्याम्ब्रिज एनालिटिकाले फेसबुकबाट प्राप्त डाटाको सहाराले २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव तथा बेलायतमा ब्रेक्जिटका विषयमा भएको जनमत संग्रहको नतिजालाई प्रभावित गर्ने कोसिस गरेको थियो भनिन्छ ।
यस विषयमा क्याम्ब्रिज एनालिटिका र फेसबुक दुबैले आरोप अस्विकार गरेका छन् र कुनै गलत काम नगरेको जिकिर गरेका छन् ।
के हो क्याम्ब्रिज एनालिटिका ?
क्याम्ब्रिज एनालिटिका एक बेलायती कम्पनी हो । यसको मालिकमा अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टीलाई चन्दा दिनेवाला अर्बपति व्यापारी रोबर्ट मर्कर पनि छन् । यो कम्पनीमाथि सन् २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावको नतिजालाई प्रभावित गरेको आरोप लागेको छ ।
यस कम्पनीले लाखौँ फेसबुक प्रयोगकर्ताको अकाउन्टको जानकारी प्रयोगकर्ताको अनुमति विना प्रयोग गरेको बताइन्छ ।
यसका लागि कम्पनीले यस्तो सफ्टवेयर तयार गरेको थियो जसबाट मानिसहरुको राजनीतिक रुझानको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
बेलायती समाचार च्यानल न्यूज फोरले डाटा एनालिटिक्स फर्म क्याम्ब्रिज एनालिटिकाका अधिकारीहरुसँग भेट गर्नका लागि आफ्ना एकजना जासूस पत्रकार पठाएका थिए ।
डोनाल्ड ट्रम्पलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव जिताउनमा क्याम्ब्रिज एनालिटिकाको भूमिका रहेको बताइन्छ ।
क्याम्ब्रिज एनालिटिकाका प्रमुख एलेक्जेन्डर निक्ससँग भेट गर्ने क्रममा जासूस पत्रकारले आफुलाई एक श्रीलंकाली व्यापारीको रुपमा प्रस्तुत गर्दै आफुले देशको स्थानीय चुनाव प्रभावित गर्न चाहेको बताए । व्यापारीको भेषमा प्रस्तुत भएका पत्रकारका सामुन्ने कम्पनी प्रमुख निक्सले आफ्नो कम्पनीले कसरी राजनीतिक विरोधीहरुलाई नोक्सान पुर्याउने काम गर्न सक्दछ भन्ने प्रष्ट रुपमा बताएका थिए । राजनेताको छवि ध्वस्त पारिदिनका लागि अभियान चलाउने देखि कल गर्लको साथमा पक्राउन वा घुस रकम सहित क्यामराको अगाडि रंगेहात पक्राउने खेल समेत खेल्नसक्ने उनले बताएका थिए ।
कम्पनी प्रमुखको यस्तो भनाई सम्बन्धी न्यूज फोरको समाचार दाबीलाई क्याम्ब्रिज एनालिटिकाले भने अस्विकार गर्दै आएको छ । नियतवस फसाउनका लागि न्यूज फोरले पटकथा तयार पारी सम्पादित डकुमेन्ट्री तयार पारेको र कुराकानीको सुरुवात न्यूज फोरका रिपोर्टरले नै गरेको कम्पनीको दाबी छ ।
फेसबुकको भूमिका के थियो ?
सन् २०१४ मा फेसबुकमा एक क्विजमा प्रयोगकर्तालाई उनीहरुको व्यक्तित्वको बारेमा जान्ने मौका दिइयो ।
क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीका प्राध्यापक एलेक्जेन्डर कोगानले यो क्विजको डिजाइन गरेका थिए । यद्यपि युनिभर्सिटीको उक्त क्याम्ब्रिज एनालिटिका कम्पनीसँग कुनै सम्बन्ध छैन ।
त्यस समय फेसबुकमा चलिरहेका एप्स तथा गेम्समा यो कुरा सामान्य थियो की क्विजमा भाग लिइरहेका व्यक्तिको जानकारीका अलावा उसका साथीहरुसँग सम्बन्धित डाटा पनि लिइन्थ्यो ।
यद्यपि फेसबुकले अहिले धेरै परिवर्तन ल्याइसकेको छ र डाटा डेभलपर्स अब यस प्रकारले प्रयोगकर्ताका डाटा एकत्रित गर्न पाउँदैनन् ।
क्याम्ब्रिज एनालिटिकाका लागि काम गरिसकेका क्रिस्टोफर वाइलीको आरोप छ की उक्त क्विजमा २ लाख ७० हजार जनाले भाग लिए र झण्डै ५ करोड मानिससँग सम्बन्धित डाटा उनीहरुको इच्छा विपरित एकत्रित गरियो ।
यी मध्ये धेरै मानिस अमेरिकी नागरिक थिए वा क्विजमा भाग लिने मानिसका फ्रेण्ड लिस्टमा थिए ।
क्रिस्टोफर वाइलीको दाबी छ की उक्त डाटा क्याम्ब्रिज एनालिटिकालाई बेचिएको थियो र ती मानिसहरुको राजनीतिक रुझानको आधारमा ट्रम्प समर्थक प्रचार सामाग्री फेसबुक विज्ञापनको माध्यमबाट ती मानिससम्म पूराइयो ।
क्याम्ब्रिज एनालिटिका यी आरोप अस्विकार गर्दछ । ट्रम्पको चुनावी अभियानका क्रममा उपलब्ध गराइएका सेवामध्ये यी कुनैपनि सामेल नरहेको उसको भनाई छ ।
के त्यो फेसबुकको नियमविपरित थियो ?
उक्त डाटा त्यस समय फेसबुकको नेटवर्कको प्रयोग गरी एकत्रित गरिएको थियो । केही डाटा डेभलपर्सले यसको फाइदा उठाए । तर फेसबुकसँग आफ्ना प्रयोगकर्तासँग जोडिएका यी डाटा दोश्रो पक्षसँग शेयर गर्ने अधिकार थिएन ।
त्यतिबेला क्विजमा भाग लिएका मानिसहरुलाई सायद यो कुराको सुइँको सम्म पनि थिएन की उनीहरुको जानकारीको प्रयोग डोनाल्ड ट्रम्पको चुनावी अभियानमा गरिनेछ ।
फेसबुकका अनुसार नियम तोडेको पाइएपछि उसले उक्त क्विज एपलाई हटाएको थियो र क्विज तयार गर्नेसँग प्रयोगकर्ताका डाटाहरु डिलिट गर्ने आश्वासन पनि प्राप्त गरेको थियो ।
क्याम्ब्रिज एनालिटिकाले पनि उक्त क्विजका डाटा आफुले प्रयोग नगरेको दाबी गर्दै आएको छ ।
फेसबुक तथा बेलायतका सूचना अधिकारी दुबैले यो जान्न चाहन्छन् की के क्विजमार्फत एकत्रित गरिएका युजर्स डाटा वास्तवमै डिलिट गरिएका थिए त ?
क्रिस्टोफर वाइली चाहीँ ती डाटा डिलिट नगरिएको दाबी गर्दछन् ।
अमेरिकी सिनेटरहरुले फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्गलाई कंग्रेसमा बयानका लागि बोलाएर फेसबुकले प्रयोगकर्ताका डाटालाई कसरी सुरक्षित राख्दछ भनेर सोध्न माग गरेका छन् ।
युरोपेली संसदका प्रमुखले फेसबुक प्रयोगकर्ताका डाटाहरुको दुरुपयोगका विषयमा छानविन गर्ने बताएका छन् ।
( अनलाईन खबर बाट )
किन गुमायो फेसबुकले एक सातामै ५८ अर्ब डलर ?
१ अर्ब भन्दा धेरै अकाउन्ट भएको जिमेल भयो १४ वर्षको, यस्ता छन अरु रोचक तथ्य
बदलिइन् बाहुबलीकी देवसेना
अब आईफोनमा पनि डबल सिमकार्ड, यस्ता छन् विशेषताहरु
कर छुट नपाए पनि चीनबाटै तेल ल्याउनुपर्छ
जी सिने अवार्ड गर्न सरकार प्रिफ्याव भवन बनाउँदै
खेल क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न आफु सधैँ सकरात्मक रहने : नगर प्रमुख गैरे